Welsh Uni students in Zim for exchange
University of Wales students in Zim for cultural exchange
Cultural exchange ... Martha Musonza Holman
SIX students from the University of Wales: Trinity Saint David (UWTSD), School of Archaeology, History and Anthropology (AHA) are in Zimbabwe for two-week cultural exchange programme
During their stay in the country, they are expected to take part in the moulding of bricks for the construction of community library in Domboshawa’s Chief Chinamhora area.
The students who have been invited by Love Zimbabwe, a Wales based charity organization founded by a Zimbabwean who is now based in the United Kingdom will also tour various historical monuments and political institutions to get an appreciation of Zimbabwe’s heritage.
Founder and director of the Love Zimbabwe, Martha Musonza Holman, told NewZimbabwe.com in Harare Tuesday that apart from interacting with Chinamhora community and meeting local universities the students have also been invited “to come and get the true Zimbabwean story”.
“Zimbabwe has an admirable culture that we can share with the entire world, but most of all we want to promote sustainable development projects which alleviate local people’s lives through social enterprises,” she said.
“These students are coming to appreciate our arts and crafts and we want them to go back and help us establishing markets in Wales
“During their stay here in Zimbabwe they are going to meet our arts producers value the products and go back and sell for us and the money goes directly to the producers, that’s what is why I invited them specifically.”
Established in 2010, Love Zimbabwe aims to engage different communities to achieve sustainable living through creating sustainable living for the community within its natural environment and African culture.
The organisation has constructed a community where different artefacts are being produced by locals.
Love Zimbabwe has twinned schools in Abergavenny in Wales, with Chinamhora Village, and other schools around Harare.